राजनीतिलाई फोहरी खेल भन्दै युवा पुस्ता भाग्ने हो भने देशमा परिवर्तन आउदैन – रेखा थापा (भिडियो) – Halkhabar kura
४ असार २०७८, शुक्रबार १७:४०
राजनीतिलाई फोहरी खेल भन्दै युवा पुस्ता भाग्ने हो भने देशमा परिवर्तन आउदैन – रेखा थापा (भिडियो)
रेखा थापा नेपाली चलचित्र जगतकी सर्वाधिक चर्चित नायिका हुन् ।
१६ वर्षको उमेरदेखि नै नेपाली सिने क्षेत्रमा सक्रिय थापा नेपाली सिने क्षेत्र मात्र नभएर राजनीतिक क्षेत्रमा पनि सक्रिय छिन् । कुनै बेला माओवादीमा रहेकी रेखा अहिले राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक पार्टी (राप्रपा) मा आवद्ध छिन् ।
उनी राप्रपाको महाधिवेशनबाटै केन्द्रीय सदस्य चुनिएकी हुन् । थापा नेपाली रजतपटमा अहिले पनि उतिकै चर्चित नायिकाको रुपमा परिचित छिन् । रेखा अहिले राप्रपाको संगठन सुधार र राप्रपाको राजनीतिक, वैचारिक ‘लाइन’मा समाहित भइरहेकी छिन् ।
योहो टेलिभिजनको पिवाईएल सो कार्यक्रम कुरा गर्दै रेखाले अहिलेको राजनीतिलाई दोस्रो पुस्ताले मात्र सुधार्न सक्ने बताइन् । उनले कुनै पनि सत्ता सञ्चालनमा गाली र गुनासो मात्रै गर्ने र मैदानमा नउत्रिए विकृति विसंगति नरोकिन्ने बताइन् । उनी भन्छिन्, ‘कहाँ कमजोरी छ ? जनताको भावना हामीले कहाँनेर बुझिरहेका छैनौं ? जनतालाई आश्वासन मात्र दिइरहेका छौँ । तर, अब युवापुस्ताले जनताको भावना सम्बोधन गर्न नेतृत्व लिनुपर्छ ।’
अहिले मध्यावधि निर्वाचनको हल्ला चलिरहेको छ । निर्वाचन होला भन्ने पनि शंका छ । थापा त्यसरी चुनाव भए नेतृत्वमा आउन सक्ने क्षमता आफूसँग भएको बताउँछिन् । ‘अहिले नै भनिहाल्ने स्थिति छैन । मैले सोचेको कुरा पनि हैन । पार्टीको निर्णय के हुन्छ, कुनै पनि जिम्मेवारी सम्हाल्न मलाई आपत्ति छैन ।’
उनले अहिले राजनीति भन्नेवित्तिकै युवापुस्ताले नाक खुम्च्याउने गरेको समेत बताइन् । ‘म के चाहन्छु भने मेरो उमेर, म भन्दा सानो उमेरका युवालाई राजनीति फोहोरी खेल मात्र हो भन्ने हैन । फोहोरी खेल हो भनेर भागिदिने हो भने राजनीति यसरी नै फोहोरी भएर जान्छ, सचेत युवा जमात राजनीतिमा आउनुपर्छ । सबै ठूलो नेता र प्रधानमन्त्री नै बन्नुपर्छ भन्ने हैन,’ थापाले कार्यक्रम कुरा गर्दै अब एकपल्ट नयाँ अनुहारलाई मौका दिनुपर्ने बताइन् । नयाँ अनुहार नभएकाले नै राजनीति गतिहीन भएको उनको भनाइ छ ।
Previous प्रचण्डको छोरी गंगा र रेणुको घरमा मैले लगानी गरेर बनाईदिएको हुँ – दुर्गा प्रसाई (भिडीयोसहित)
Next भारतको सबै भन्दा नजिकको व्यक्ति नै केपी ओली हुन्, प्रचण्ड र देउवा हुदै होइनन् (भिडियोसहित)